Idzo idiki diki dzinokutora kubva pahupenyu hwakanaka | Bezzia
Susana Garcia | 04/05/2021 20:00 | Welfare, Utano
Dzimwe nguva zvinhu zvidiki zvine mibairo mikuru uye humbowo hweichi ndechekuti kusanganisa madiki ezuva nemasaini kunogona kutungamira kuhupenyu husiri hwerudzi rwehupenyu hwatinoda kurarama. Iwo madiki madiki ehupenyu hwezuva nezuva anotipunyuka isu asi inogona kutora danho kana zvasvika pakutungamira mararamiro Kutsunga kana kuchinjanisa zvachose. Izvo zvakakosha kusimbisa kwete chete zviito zvikuru asi zvakare zvidiki zvidiki.
Un diki diki inodzokororwa zuva rega rega inova chimwe chinhu chinotibata isu zvizhinji. Izvi zvinoenda kune zvese uye zvinogona zvakare kuve chinhu chakanaka nekuti neshanduko diki tinogona kuzadzisa zvibodzwa zvikuru. Saka ngationei kuti ndeapi madiki madiki ayo nhasi asingatenderi iwe kurarama hupenyu hune hutano.
1 Iwe hausi kuronga kudya kwako
2 Unozvibvumira zvinhu zvakawanda
3 Iwe unongotarisa pakurasikirwa nehuremu
4 Unoita mitambo yausingade
5 Zvibvumire kuti unzwe shanduko
Iwe hausi kuronga kudya kwako
Izvi zvinogona kutaridza kusanzwisisika asi kana tikasaronga zvekudya zvedu zviri nyore kwatiri kuti tiwire mumuedzo wekudya chinhu chisina hutano chinogadzirwa zvakanyanya kana chine mafuta neshuga. Ndokusaka kuronga kwakanaka kuchikubatsira iwe zvakanyanya kana zvasvika pakutangisa hupenyu hune hutano. Tinogona kuzvifadza pachedu asi vanofanirwa kubata nguva, chete pamazuva akakosha. Iyo yasara yenguva isu tinofanirwa kunamatira kune imwe Kudya kwakaringana uye kune hutano kudzivisa kuwedzera zvinwiwa kana zvinhu zvinogona kuita kuti kudya kwedu kumire kuve hutano.
Unozvibvumira zvinhu zvakawanda
Ichokwadi kuti isu tinogara tine mamwe mazuva atinoshuvira chimwe chinhu chinotapira kana kuti zvakaoma kusadya kana kunwa doro panguva yemabiko. Asi izvi zvinhu zvezvinhu ndizvo zvinoita kuti isu pakupedzisira titadze kutungamira mararamiro ane hutano sezvatinoda zvirinani tisingazvizive, nekuti tinotakurwa nezvibvumirano zvidiki izvi. Saka zvakakosha kugara uchiziva mazuva atinokwanisa kutenga chimwe chinhu, tisinganyanye. Kwete chete hutano hwedu uye yedu mutsara achatitenda isu, asi zvakare kwedu dumbu kugarika. Iwe unozoona kuti kugaya kunorema zvakadii uye kuti unonzwa sei zvirinani uye zvirinani.
Iwe unongotarisa pakurasikirwa nehuremu
Iyi haisi nzira yekurapa yehupenyu hune hutano, sezvo paine vanhu vanogona kunge vakaremerwa asi vachiri vatano uye vamwe vakaonda. Saka funga kuti izvi hazvisi zvekudzora huremu kuti utarike zviri nani, ndezvekutarisira muviri wako kuti unzwe zvirinani. Patinozvitarisira isu pachedu tinovandudza kuzvidzora kwedu asiwo hutano hwedu, immune system uye nekudaro tinovandudza muviri wedu wese munguva pfupi uye yakareba. Iwo maonero epasirese ehutano kure neiyo fashoni pfungwa iyo inotarisa chete pane chiyero.
Unoita mitambo yausingade
Uku kukanganisa, nekuti nekufamba kwenguva unozopedzisira wasiya zvemitambo. Wese munhu anogona kuwana chiitiko chinoenderana navo mararamiro uye zvaunofarira. Izvi zvakakosha kuti igare nekufamba kwenguva. Ndosaka iwe uchifanira kwete kungosiyana chiitiko chako uye kuyedza kuti mangani anokwezva kutarisa kwako, asi iwe unofanirwa kutsvaga avo vaunoda kuti vazove chikamu chehupenyu hwako.
Zvibvumire kuti unzwe shanduko
Shanduko hadziitike kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera uye ndosaka dzimwe nguva tichiomerwa nekuzviita. Zvakakosha teerera kumutumbi wedu kana taita shanduko mumararamiro edu, nekuti achatiudza kuti tiri kuita zvakanaka. Izvi hazviitike nehusiku, asi hutano hwepanyama uye hwepfungwa hunouya nehupenyu hwakanaka uye ndosaka tichizozviona patinozvinzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Iwo madiki madiki anokutadzisa iwe kubva kuva nehutano hupenyu